/Blog/Ithala/I-Nootropic Coluracetam: Ungasebenza njani kuBongo kunye nokunyanga unxunguphalo
ezaposwa ngomhla 03 / 17 / 2021 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
Usapho lweRacetam yeNootropic- IColuracetam
IColuracetam (i-BCI-540, okanye i-MKC-231) yi-nootropic enyibilikayo enamafutha kudidi lwe-racetam yeekhompawundi. IColuracetam inamandla ngakumbi kune-racetam yoqobo, IPiracetam. IColuracetam yayinelungelo elilodwa lomenzi wayo nguMitsubishi Tanabe Pharma waseJapan ngo-2005. Iyenza enye yezona nootropics zintsha zisekwe kwi-racetam.
Ilungelo elilodwa lomenzi weColuracetam kamva lathengiswa kwiBrainCells, Inc. eSan Diego, California. I-BrainCells yinkampani encinci, ebanjwe bucala ye-biopharmaceutical inkampani egxila ekuphuhliseni iikhompawundi zokunyanga isifo sokudakumba (MDD), uxinzelelo olunganyangekiyo kunyango (TRD), kunye nesifo seAlzheimer.
IColuracetam iyafana nakwimeko yePiracetam. Kwaye njengazo zonke i-racetam nootropics, ine-pyrrolidone nucleus kumbindi wayo. Uphando lwamva nje lwezonyango lubonisa ukuba kunokwenzeka ukunyanga uxinzelelo kuxinzelelo, kunye nomonakalo we-retinal kunye ne-optic nerve.
IColuracetam yomelele kakhulu I-choline yokujolisa kwi-supplement. Ikonyusa ukuguqulwa kwengqondo ye-choline yakho ibe yi-acetylcholine (ACh) ngenkqubo ephezulu yokufumana (HACU). Okonyusa ukuphaphama, ukujonga iinkcukacha kunye nememori.
Olunye uphando, kunye namava obuqu abonisa iColuracetam inokuchaphazela ii-AMPA receptors. Ukwenza i-nootropic ye-ampakine. Yintoni enokuchaza iziphumo ezinjengezikhuthazi ngaphandle kwemiphumo emibi yezikhuthazo zesiko. IColuracetam ikwabonisa i-anxiolytic (anti-ixhala) yeempawu ezinceda ukuphucula imeko yeemvakalelo kunye nokuzola koxinzelelo.
Njani Coluracetam Imisebenzi(Indlela yokuSebenza)
Njengoninzi lweekhompawundi, icoluracetam (CAS:135463-81-9) isebenza ikakhulu ngokwandisa amanqanaba e-neurotransmitter acetylcholine, ehambelana kakhulu nokufunda, inkumbulo kunye nokuqonda.
Nangona kunjalo, indlela i-coluracetam emodareyitha ngayo amanqanaba e-acetylcholine yahlukile. Ngokwesiqhelo, ii-racetams zibangela ukuveliswa kwe-acetylcholine ngokukhuthaza ii-receptors ezifanelekileyo, kodwa i-coluracetam ikwenza oko ngokuphucula ukuthathwa kwe-choline ephezulu, okanye i-HACU. Inkqubo ye-HACU imisela inqanaba apho i-choline itsalwa kwi-neurons yokuguqula ibe yi-acetylcholine.
Ngokwandisa inqanaba lokutsalwa kwe-choline kwiiseli zemithambo-luvo, i-coluracetam inyusa ukuveliswa kwe-acetylcholine kwaye ibangela amanqanaba obuchopho ale-neurotransmitter ebalulekileyo ukuba inyuke. Kukwabonakalisiwe ukuba kudale ukonyuka kwe-molekyuli yokuhambisa i-choline ephezulu kakhulu ehambelana ne-CHT1, ekhokelela ukufumaneka ngokukhawuleza kwe-choline ukuze kuthathwe.
Ngokudibeneyo ezi ntshukumo zikhokelela kumanqanaba aphezulu e-acetylcholine, enxulunyaniswa nokwandiswa kwengqondo kunye nememori.
benefits kwaye I ziphumo Of IColuracetam
❶ IColuracetam iphucula iMemori kunye nokuFunda
Izibonelelo zeColuracetam zingqina ukusebenza kunyanzeliso lwengqondo kunye nokusebenza kwememori kwiigundane kunye neziphumo ezifanayo ebantwini. Iiseli zeBongo Inc.ziqhube isifundo esityhila ukuphuculwa kwengqondo kwiigundane emva kokufumana i-AF64A kangangeentsuku ezisibhozo. Uphuhliso luqhubekile nokuqhubeka nangaphaya konyango. Isifo se-Alzheimer kukhokelela kumanqanaba asezantsi e-acetylcholine. Ngokukhula kwe-acetylcholine kwi-hippocampus, i-coluracetam iya kunyusa iimpawu zesifo i-Alzheimer njengokuphazamiseka kokufunda kunye nememori engeyiyo.
❷ IColuracetam inciphisa ukunyanga okunganyangekiyo kunyango
Kuphononongo lwabantu abali-101 abanoxinzelelo, abangakhange bafeze iziphumo zonyango nge-anti-depressants, ibinefuthe elakhayo kuphuculo olubonakalayo kumgangatho wobomi kuma-80 mg ka-3 ngosuku. Nangona kunjalo, le kuphela kwesifundo ebantwini. Ubungakanani ebuphetheyo bokunciphisa i-glutamate noxiousness inokuba noxanduva lweempembelelo zayo ezilungileyo kunyango loxinzelelo.
❸ IColuracetam inciphisa amaxhala
Kwisifundo se-rat, i-dosing yeentsuku ezingama-21 ze-coluracetam ibonisa ukuphucuka kwe-20% koxinzelelo, eyayiphezulu kune-12% yefuthe le-valium kwiidosi enye kwisifundo esinye.
❹ IColuracetam Ukunyusa iNeurogeneis
Olunye uphononongo lukhankanya ukuba luyanceda kwi-neurogeneis. Indlela ephambili ayikacaci, kodwa inxulumene nolawulo lwayo kangangeeveki ezininzi, olonyuka kwi-acetylcholine kwingingqi yehippocampus. Indlela ayaziwa, kodwa kucingelwa ukuba inxulumene nokwanda kwe-hippocampal acetylcholine xa i-coluracetam ichithwa imihla ngemihla iiveki ezimbalwa.
❺ IColuracetam Unceda ngeSchizophrenia
IColuracetam yonyusa umsebenzi we-CHAT kwiigundane ezinomonakalo weseli yethambo. Olu nyuso lubonisa ukuba lunokunceda izigulana ezine-schizophrenia ngokusebenzisa le enzyme efanayo. Olunye uphando ngokuthe ngqo kubantu abane-schizophrenia luyaqhubeka.
❻ IColuracetam Kwandisa Amehlo
IColuracetam ibonakalise amandla ayo e-optic njengokuphuculwa kombala, umbono kunye nokuqaqamba. Ngokukodwa, ikhuthaza ukukhula kwemithambo-luvo kwisifo esiqhekezayo se-retinal. Izifundo ezininzi zikhankanya umbono ongcono wombala kunye nokubukhali kwamehlo, kodwa akukho phando lwenzululwazi luye lwaqinisekisa ezi ziphumo.
I-AASraw ngumenzi wobugcisa beColuracetam.
Isebenza njani iColuracetam eBrain?
IColuracetam yonyusa impilo yengqondo kunye nokusebenza ngeendlela ezininzi. Kodwa babini ngokukodwa abemi.
IColuracetam yonyusa ingqondo yakho'Ukuthathwa kwe-choline ngokujolisa kunye nokusebenza ngenkqubo ephezulu yokufumana (HACU) inkqubo ye-neurons yengqondo.
I-Acetylcholine (ACh) yenziwe nge-choline kunye ne-acetate. Oku kufuneka kufumaneke kwisiphelo se-neuron ngalo lonke ixesha. Ukuze i-ACh idityaniswe nanini na xa ifuneka.
Isoline yasimahla ejikeleza egazini inqumle isithintelo segazi nengqondo. Kwaye ithathwa ngamachaphaza e-cholinergic neuron. Iyathathwa iye kwi-neuron ngenkqubo yokutholwa kwe-choline ephezulu (HACU). Ukuhlanganiswa kwe-ACh kwenzeka kwi-synaptic cleft. Isithuba esiphakathi kwee-neurons njengoko sihamba siye kwi-neuron.
Inkqubo ye-HACU yiqondo lobushushu-, amandla-, kunye nesodium. Le nkqubo yeyona nto iphambili apho i-choline efunekayo ukuze kudityaniswe i-ACh ihanjiswe kwi-neuron. Kwaye linyathelo lokunciphisa umda kwimveliso yale neurotransmitter ebaluleke kakhulu.Xa le nkqubo isophuka okanye ingasebenzi ngokukuko njengoko yayiyilwe, ufumana iingxaki kwimemori, ukufunda, kunye nenkungu yengqondo.
Iziphumo zeColuracetam kwaye ziyanceda ukuba zisebenze ngokufanelekileyo. Ngapha koko, kubonakala ngathi inyusa inkqubo ye-HACU. Nokuba kwii-neurons ezonakeleyo. Ukonyusa i-acetylcholine kwii-neurons kunceda ukuphucula inkumbulo, kwandisa ukuqonda kunye nokubonelela ngobuchule bokwenza izigqibo.
IColuracetam ikwabonakala ngathi iphucula amandla e-AMPA. Ii-receptors ze-AMPA zichaphazeleka yi-glutamate. Esebenza kwingqondo nakwinkqubo ye-nervous central ukuphucula ukuphaphama kunye nokuqonda.
I-Coluracetam isebenza kunye ne-AMPA potentiation kunye ne-choline yokunyusa ukuphucula. Olu dibana lubonakala lunceda ukuphucula ukuphazamiseka kwemood ngaphandle kokuchaphazela amanqanaba e-serotonin.
I-Serotonin Selective Reuptake Inhibitors (i-SSRIs) yeyona ndlela ikhethwayo yonyango yesiqhelo yokujongana nokuphazamiseka kwemood kunye noxinzelelo. Beza noluhlu lweziphumo ebezingalindelekanga eziyingozi. Kwaye ungasebenzi kwisigulana ngasinye esidandathekileyo.
Abaphandi baxela ukuba iColuracetam iluncedo ekunyangeni uxinzelelo olukhulu lweklinikhi kunye noxinzelelo lwexhala. Ngaphandle kokuchaphazela amanqanaba e-serotonin kwingqondo. Kwaye ngaphandle kweziphumo ebezingalindelekanga ezihamba nokuphazamisa i-serotonin.
IColuracetam Ukusetyenziswa: Isisombululo kunye ne-Stack for Reference kuphela
IColuracetam yinkompo engafumanekiyo nakuphi na ukutya kwaye imizimba yethu ayinakuyivelisa. Kungoko, ekuphela kwendlela yokuvelisa izibonelelo zale molekyuli kukudibanisa.
IColuracetam idla ngokuthengiswa ngomgubo okanye kwifomsule kwaye inokuthathwa ngomlomo. Iidosi zinokuthathwa ngokungaphantsi (phantsi kolwimi) ukufakwa ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Kuba icoluracetam yeyona arhente inamandla, kuyacetyiswa ukuba uqale ngeyona dosi isezantsi. Ukuba ufumanisa ukuba kufuneka wandise idosi ukuze uve izibonelelo, oku kufuneka kwenziwe ngokuthe chu kwaye akufuneki ukuba kudlule kwi-80mg.
IColuracetam ayinetyhefu kwaye ithathwa ngokuba ikhuselekile kwaye iyanyamezeleka.Zimbalwa kuphela iziphumo ebezingalindelekanga ezinxulunyaniswa nekhompawundi, ezinje ngexhala, intloko ebuhlungu, ukudinwa kunye nobucaphucaphu. Ezi ziphumo bezingalindelekanga zinqabile kwaye zihlala zenzeka kuphela xa kungekho siziba sikhulu saneleyo se-choline ukuba sisetyenziselwe ukuhlanganiswa kwe-acetylcholine. Kungenxa yoko le nto sicebisa ukuba siqale ngokunyusa i-coluracetam yokunyusa amanqanaba e-choline njenge-citicoline.
IColuracetam inokusebenzisana namanye amachiza, ngakumbi lawo asebenzisana ne-NMDA receptor. Oku kubandakanya ukuthintela ukukhwehlela kunye neanesthetics. Ezinye izinto ezinxibelelana nenkqubo ye-cholinergic, enje ngamayeza e-glaucoma kunye ne-nicotine, inokusebenzisana neziphumo ze-coluracetam. IColuracetam inokuphikisana nefuthe leziyobisi ezichasene ne-cholinergic (ezinje ngeBenadryl, ezinye ze-antipsychotic kunye namayeza kaParkinson).
Njengalo naluphi na uncediso, ukuba unamayeza okanye unempilo, kusengqiqweni ukuba uthethe nogqirha wakho ngaphambi kokuqala zongeza ulawulo.
※ Kwenziwa kanjani zifakwa Well Wzi Ezinye iziyobisi
♦ IColuracetam yimolekyuli enyibilikayo enamafutha, kungoko kulunge kakhulu ukutyeba ngamafutha asempilweni anjenge coconut okanye ioyile ye-MCT.
♦ IColuracetam kufuneka ibekwe kunye yokuncedisa ezinjenge citicoline. I-Citicoline inyusa iphuli ye-choline ekhoyo yokuhlanganisa. Isitaki singenza iziphumo ezinamandla ngokwandisa i-choline (citicoline) kunye nokukwazi ukuyidibanisa ibe yi-acetylcholine (coluracetam).
※ I-Dose ekhuthazwayo: 5-80mg ngosuku
Sincoma phakathi kwe-5-80mg ye-coluracetam ngosuku.
Umda ophezulu okhuselekileyo we-coluracetam yi-80mg ngosuku. Nangona kunjalo, sicebisa ukuba uhlale kunye ne-35mg ngosuku njengoko iziphumo zeedosi eziphezulu zingakhange zivavanywe ngokupheleleyo ebantwini.
Kukulungele ukwahlula la madosi kusasa okanye emva kwemini yedosi. Umzekelo, idosi ye-20mg ye-10mg kusasa kunye ne-10mg eyenye emva kwemini.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, kuya kufuneka uqale kwisiphelo esisezantsi kwinqanaba lokulinganisa. Ukuqala kwethamo elisezantsi elincomekayo kuya kunciphisa ukubakho kwamava naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga.
Iziphumo ezibi zeColuracetam
IColuracetam ayinatyhefu. Iyaqwalaselwa ke inyamezeleke kwaye ikhuselekile. Uninzi lwabasebenzisi bexesha lokuqala beColuracetam baxela ukudinwa okuhlala kusisiphumo sokuqala ngedosi ephezulu kakhulu.
Khumbula, iColuracetam isebenza ngokwandisa ukuthatha i-choline kwingqondo yakho. I-Choline sisandulela semveliso ye-acetylcholine. Ukuba ayonelanga i-choline ekhoyo kwinkqubo yakho, uya kuziva iziphumo ebezingalindelekanga.
Iintloko zokusebenzisa iColuracetam zihlala zenzeka xa ulibale ukudibanisa kunye nesongezelelo se-choline. Intloko zihlala ziluphawu lokusilela kwe-choline kwingqondo yakho.
IColuracetam lelinye lawona malungu matsha kwaye angaqhelananga neklasi ye-racetam ye- nootropics, kodwa iyintandokazi kubasebenzisi abaninzi.
Yonyusa amanqanaba e-acetylcholine '' yokufunda i-neurotransmitter '', enokuthi inyuse ukuqonda, kunye nezifundo zezilwanyana zibonisa ukuba inokulungisa ukusilela kwememori ngaphandle kweziphumo ebezingalindelekanga. Nangona kukho uphando oluncinci lwabantu olubhalwe kwi-coluracetam, uphando olukhoyo lubonisa ukuba lunokuba luncedo oluxabisekileyo loxinzelelo kunye nokudakumba.
Abasebenzisi abaninzi bathembela kuyo njengokunyusa imood ethembekileyo kunye nokunyusa inkumbulo ebanika ukugxila okungcono kunye noxinzelelo. Abanye bathi ibanika ukulingana "nombono we-HD", okwenza imibala ikhanye, umahluko ngakumbi, kunye nezibane ezikhanyayo ngakumbi.
I-Coluracetam yinkomfa enamandla, ngoko ke ixabiso lemilinganiselo liphantsi, kwaye liyaziwa ngokuba lisebenza ngokukhawuleza. Ithengiswa njengokutya zongeza e-US kwaye unokungeniswa ngokusemthethweni eCanada nase-UK ngexabiso elincinci.
Kukho okuninzi ekufuneka kufundwe malunga ne-coluracetam, kodwa kubonakala ngathi kukhuselekile kubasebenzisi abaninzi xa bethathwa ngokufanelekileyo. Ukuba unomdla wokongeza into entsha eyahlukileyo kweyakho isitaki se-nootropic, I-coluracetam inokuba yenye yokuqwalaselwa.
IColuracetam ayinalo uphando olubanzi, izifundo ezikhoyo zibonisa amandla amakhulu okusetyenziswa kwayo. Le yenye yeeracetam ezihamba phambili zamva nje, ecaleni kwelinye Fasoracetam. Nangona kunjalo, kutshanje, i-FDA ivume "ukwandiswa" kweFasoracetam kunyango lwe-ADHD.
 I-Brauser D. "I-Neurogeneis-ekhuthaza iikhompawundi bonisa isithembiso kunyango loxinzelelo olukhulu" iMedscape News yezoNyango ngoSeptemba 21, 2009
 Murai S., Saito H., Abe E., Masuda Y., Odashima J., Itoh T. Ijenali yeCandelo eliDlulisa ukuhanjiswa ngokubanzi kweNeural. Ngo-231; 1994 (98): 1-1.
 Takashina K., Bessho T., Mori R., Eguchi J., Saito K. "MKC-231, a choline uptake enhancer: (2) Umphumo wokudityaniswa kunye nokukhululwa kwe-acetylcholine kwiigundane eziphathwe nge-AF64A." Ijenali yokuThunyelwa kweNeural (Vienna). NgoJulayi ka-2008; 115 (7): 1027-35.
 UBessho T., Takashina K., Eguchi J., Komatsu T., Saito K. Ijenali yokuThunyelwa kweNeural (Vienna). NgoJulayi ka-231; 1 (64): 2008-115.
 UAkaike A., Maeda T., Kaneko S., Tamura Y. Ijenali yaseJapan ye-Pharmacology. NgoFebruwari 231; 1998 (76): 2-219
 UShirayama Y, Yamamoto A, Nishimura T, Katayama S, Kawahara R (Septemba 2007). "Ukuvezwa okulandelayo kokunyusa i-choline yokunyusa okuphuculweyo kwe-MKC-231 kuchasene ne-phencyclidine-indenti yokusilela kokuziphatha kunye nokunciphisa i-septal cholinergic neurons kwiigundane". IYurophu yeNeuropsychopharmacology. Ngo-17 (9): 616-26.
 Ulungelelwaniso lweProjekthi yokuFunyanwa kweNyango kuRhulumente waseCalifornia, IRS.gov.
 UMalkhkh, AG, kunye noSadaie, MR (2010). IPiracetam kunye nePiracetam-njengeziyobisi. Iziyobisi, i-70 (3), 287-312.
ICurcumin Derivative J-147 yonyango i-AD, yokuguga, yoxinzelelo kuxinzelelo (MDD) Iziyobisi ekujoliswe kuzo Ibrutinib: Wazi ntoni wena